▷ Cyber ​​​​Isniinta TV Deals Blog Live: Heshiisyada OLED iyo QLED ee Maanta ugu Fiican - 【Isbarbardhigga】 2022
Cyber ​​​​Isniinta TV Deals Live Blog: Heshiisyada OLED iyo QLED ee Maanta ugu Wanaagsan
Balaadhinta - Xiliga 1
Fiidiyowga Fiidiyowga Amazon (Video ku saabsan Baahida); Cas Anvar, Thomas Jane, Dominique Tipper (Jilayaasha); Mark Fergus (Qoraa) - Robin Veith (soo saare)
Haddii aad rabto in aad wax yar ku kharash garayso TV-ga mini LED-ka kaas oo ka yara wanaagsan TCL 6-Series, eega LG QNED 90. Waxa lagu heli karaa cabbir 65-inji ah oo loogu talagalay € 1,599. Way dhaawici doontaa boorsadaada in ka badan, taasi waa hubaal, laakiin waxay noqon doontaa mid aad uga farxisa isha.
Hadda oo qaar ka mid ah moodooyinka jaban la sheegay, aan eegno qaar ka mid ah isku-dhafka dhex-dhexaadka ah ee casiir leh oo iyaguna maanta sameynaya heshiisyo waaweyn.
Mid ka mid ah TV-yada aan jeclahay ee sannadkii hore, Sony X90J, ayaa lagu iibinayaa shabakadda Cyber ​​​​Isniinta wuxuuna hoos ugu dhici doonaa kaliya € 999 moodel 55-inji ah Best Buy.
Haddii aad raadineyso wax ka weyn, fiiri 646-inch R6 TCL 65-Series kaas oo sidoo kale lagu iibinayo € 999.
LG C1 OLED wali wuxuu ahaan lahaa Cyber ​​​​Isniinta ugu iibinta wanaagsan ka dib baaritaanka caanka ah ee CX, kii ka horreeyay 2020.
Taxanaha C wuxuu ku jiraa isku darka saxda ah ee qiimaha iyo waxqabadka, isagoo keenaya tayada muuqaal aan hoos u dhicin oo leh guddi OLED iyo processor tayo sare leh, oo qiimo aad u macquul ah u ah tignoolajiyada horumarsan.
LG waxa kale oo ay hirgelisay istaraatijiyad qiimo jaban oo aad u guulaysata, iyada oo si tartiib tartiib ah hoos ugu dhigaysa qiimaha OLED C1 sida Jimcaha Madow iyo Cyber ​​​​Isniinta, iyada oo soo jiidanaysa mowjado kale oo dukaameeysi dhowrkii toddobaadba mar.
Gudaha UK waxaad ka heli kartaa LG C1 kaliya € 900 ee dhexda 48 inch, oo ah € 400 laga dhimay qiimihii liiska, halka iibsadayaasha Mareykanka ay iibsanayaan. ku qaado €1,099. Runtii middaan kuma seexan lahayn.
Ruuxa runta ah ee Cyber ​​​​Isniinta ayaa helaya aaladaha ugu jaban ee suurtogalka ah, iyo Best Buy ayaa ilaalinaysa ballan-qaadkaas. Iibka ugu fiican ee TV-ga wuxuu ku bilaabmaa tirooyin aad u yar, oo leh 24-inch Insigna HDTV kaliya $ 99.99 ka dib qiimo dhimis ah €70.
Kaliya waxaad helaysaa xallin HD ah, laakiin madal caqli-gal ah oo TV-ga Dabka ah, barnaamijyo badan oo qulqulaya, iyo cabbir kooban ayaa tan ka dhigi doona riyo iibsad miisaaniyad yar leh oo leh baahiyo TV fudud.
Wixii faahfaahin ah oo xoogaa ka sarreeya, moodelka HD oo buuxa wuxuu ku kacayaa € 129.99 ka dib mid aad u wanaagsan. € 60 qiimo dhimis, halka nooca 32-inch ah € 139.99 halkii.